मेरो बुढीले अर्कैको गर्भ बोके’की छ, म के गरौ भन्दै श्री’मान मिडियामा (भिडियो हे’र्नुस्) – Online Nepal Site
मुख्य पृष्ठ /News/मेरो बुढीले अर्कैको गर्भ बोके’की छ, म के गरौ भन्दै श्री’मान मिडियामा (भिडियो हे’र्नुस्)
काठमाडौ । समाजमा अनौठो घ’टना हुने गरेका छन् । आफ्नो श्रीमती ग’र्भवती भएपछि उनका श्रीमान म अन्यायमा परेँ भन्दै मिडियो बोलाएका छन् । वैदेशिक रोजगारीका लागि भारत गएका उनी असारमा घर आउँदा आफ्नो श्रीमती ग’र्भवती भएको देखेपछि उनी अचम्म परेका थिए ।** भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला **
दागंको हापुरमा रहेकी ति महिलाको गाउँकै एक युवाको ग’र्भ रहेपछि उनका श्रीमान म अन्यायमा परेँ भन्दै मिडिया बोलाएका हुन् । मंसिरमा रोजगारीका लागि भारत गएका उनी असारमा आउँदा गर्भवती भएको श्रीमती देखेपछि उनी अचम्म परेका हुन् । श्रीमानले श्रमतीको ठुलो पेट देखेपछि के हो यो ? भनेर प्रश्न गरेका थिए । त्यतीबेला अर्कैको ग’र्भ हो भनेकी श्रीमतीले प्रहरी कार्यालयमा पुगेपछि भने श्रीमानकै हो भनिदिइन् ।
श्रीमानले म घरमा थिइन, यो सन्तान मेरो होइन भन्दा प्रहरीले प्रमाण मागे । उनका श्रीमान भन्छन्, ‘म भारत गएको आएको टिकट मागे, भारतमा जहाँ काम गरेको हो त्यहाँको हाजिरी लिएर आइज भने । मलाई यस्तो होला भन्ने के थाहा ? अब यतिबेला प्रमाण कसरी ल्याउने ?’ प्रहरीलाई प्रमाण दिन नसकेका कारण उनी अहिले अर्कैको ग’र्भ बोकेकी श्रीमतीसंगै बसेका छन् ।
श्रीमतीले मिडिया सामु पनि आफ्नो पेटमा भएको बच्चा आफ्ना श्रीमानको नभएको बताएकी छन् । आफुलाई ग’र्भवती बनाउने युवाले ध म्की दिएका कारण प्रहरी कार्यालयमा झुटो बोलेको उनको भनाई छ । ति युवाले पैसा समेत दिने भनेर आश्वासन दिएका थिए ।
तर पैसा समेत नदिएको उनको भनाई छ । प्रहरी कार्यालयमा श्रीमानले प्रमाण जुटाउन नसकेपछि श्रीमती र यो बच्चालाई म आफै पाल्छु भनेर कागज बनाएर घर फर्किएको बताएका छन् । यता श्रीमानले भने मलाई अब त्यो केटाको पैसा पनि चाहिन्न यो श्रीमती पनि चाहिन्न भनेका छन् । ** भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला **